Haisi yako iPhone, iOS 11 Mail ine matambudziko nemaAptlook account | IPhone nhau
Matambudziko neIOS 11 endereraKunyangwe yakavezwa korona yeiyo iOS vhezheni iyo yakatanga iyo yakawanda Betas isati yatanga kuvhurwa zviri pamutemo, zviputi zvinoteedzana zvichiteedzana. Nezvose uye neizvi, isu vedu vanga tichingogara tichiedza maBetas tanga tatoziva kuti iyo yekushandisa system yaizosvika mazuva epamutemo nezvakawanda zvinhu zvichiri kuda kuitwa.
Asi zvakare iOS Mail ndeyekushandisa mukutarisa, zvakanyanya zvekuti Apple yasimbisa kuti iri kuve nematambudziko neMicrosoft services senge Outlook, Exchange, uye Hofisi 365.
Kambani yeCupertino yakasimbisa kuti iri kushanda yakabatana neMicrosoft kugadzirisa matambudziko aya, zvirinani mugwaro rayo rakaburitswa pa19 pawebhusaiti yeIOS 11, rakatonyevera kuti panogona kuve nezvinetso mune izvi.
Kana iwe usingakwanise kutumira maemail kuburikidza neAptlook kana Shanduko ungangoona mameseji ekukanganisa, nekuti maseva eMicrosoft ari kuramba mameseji anobuda neMeyili Tinoziva nezvematambudziko aya anobva kuGM yeIOS 11. - Apple chinyorwa.
Sezviri pachena Apple haizive chete dambudziko iri, asi zvakare iri kushanda kurigadzirisa kwenguva yakareba, kunyanya kubva GM yeGOS 11.
Tiri kushanda neizvi dambudziko, tinokurudzira kurodha pasi mutengi weAptlook zvakananga kubva kuApp Store. Uyu mutengi anopa tsigiro izere yeAptlook, Office 365 uye Exchange Server 2016. Kana iwe uri kushandisa iyo iOS Mail application iwe uchafanirwa kugadzirisa uye kudzima HTTP / 2 muWindows Server 2016 kuti ishande nemazvo. Mirayiridzo yekugadzirisa iyi inowanikwa muK KB 4032720 chikamu chewebsite. - Tarira kubva kuMicrosoft.
Muchidimbu, Zvese zvinoratidza kuti Apple ichagadzirisa zviri kure matambudziko ayaTinogona chete kumirira Redmond naCupertino kuti vaite basa ravo nemazvo, asi havazi matambudziko eIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Haisi yako iPhone, iOS 11 Mail ine matambudziko nemaakaunzi maAptlook
Zvakanaka, ndanga ndichishanda nedambudziko iri kwenguva yakareba uye ini ndatova nemaemail akakwana mubhokisi rangu, ndinotarisira kuti ichagadziriswa munguva pfupi ...